Abahleli sokuqhafaza ezinguqulweni ezimbili eziyisisekelo
Modern Ihluzo abahleli ukuba ukwazi ukudala zonke izinhlobo izithombe nemidwebo, kanye hlela bese uzibheka. Ukuze isithombe babekwazi ukwenza noma yisiphi isenzo, kufanele ngaso sonkhe sikhatsi yetfulwe ngendlela yedijithali. Ukuze afeze le nqubo, kunezindlela ezimbili eziyisisekelo. Indlela elula wabo kusho ukuthi i-pixel ye ngayinye eceleni. Okungukuthi, Iphuzu ngalinye kuchazwe umbala othize. Izithombe kusetshenzwe ngale ndlela zibizwa ngokuthi bitmaps. Ngale ndlela, njengoba umthetho, okufakiwe izithombe, izithombe eziningi imibala kanye imidwebo. izinhlelo eziningi ezisebenza zihlanganisa khulula abahleli ingcaca yalolu hlobo.
Isibonelo esihle isithombe bitmap ongakhonza isicelo Paint ohlelweni lokusebenza le-Windows. Ngokuqondene nozakwabo esikhokhelwayo, kukhona namuhla uhlelo alinganayo-Adobe Photoshop ayikatholakali. Raster ihluzo abahleli kubhekwe ngazozonke izindlela ukusebenza ngempumelelo nge ngezithombe eziskeniwe nezithombe digital. Lokhu kungenxa ngokuyinhloko yokuthi kwaba enengqondo ukuze kuzuzwe arcade isithombe ngokushintsha palette umbala. Uma kudingeka, ukwandisa ukukhanya, susa okuncane isithombe zamehlo. Umsebenzisi anikezwe inkululeko nganoma iyiphi ephelele zokudala ngokusebenzisa zonke izinhlobo nemiphumela.
Nokho, umdwebo kusuka ekuqaleni - akulula. Ngakho-ke, Vector ihluzo abahleli ziye lutfutfukiswa ngekuhamba kwesikhatsi, usebenzisa njengoba izakhi eziyisisekelo lezinto ezihlukahlukene ngesimo imigqa nomumo. Incazelo kungenxa zezibalo. Ngokwesibonelo, kuphela izixhumanisi esizoqala kanye ekupheleni phuzu, kanye umbala kanye ukushuba Udinga ukucacisa nezithombe ngqo umugqa ingxenye. Endabeni raster ihluzo kuzofuneka ukuthi ucacise konke iphuzu elilodwa, futhi lapho inani Amaphikseli ukujiya enkulu singase sinyuse kakhulu. Kusukela konke lokhu kusobala ukuthi raster ihluzo abahleli incazelo sasivumela jikelele ivolumu, nakho ezimweni eziningi akudingekile.
Dala izithombe kusuka ekuqaleni lula kakhulu Vector ihluzo izicelo lapho kuyadingeka wokuveza wesifunda umdwebo noma umdwebo ngaphandle ushintsho bushelelezi imibala. Nokho, umsebenzi ngezithombe noma imisebenzi yobuciko in Kulokhu akukakabi zinkulu. Izinga a vector isithombe uyakekela has cishe akukho senzo ezimbi. Ngakho, Vector ihluzo isithombe abahleli Ungakha izithombe undemanding isikali ushintsho.
isikhundla aholayo phakathi ukuthuthukiswa okufanayo basonta uhlelo CorelDRAW, nakuba manje kunezinye isofthiwe eziningi zalolu hlobo. Ukukhethwa umhleli ezifanele lufanele lwenteke kulamazinga lalandzelako kuncike umsebenzi, khona-ke kufanele kube nezinkinga ezingathi sína umsebenzi.
Kanjani amandla izingxenyekazi zekhompyutha ikhadi
Uhlelo lokuqapha lokushisa: computer lokushisa
Ukuqagela kwi Book Izinguquko abahumusha enemininingwane. Sokuqonda ezinye izinhlamvu
Quality izinguqulo, kungase kutholakale ejensi translation kuphela.
I izakhiwo rheological kwegazi - kuyini?
Ukugcoba nge-kefir: i-pie nekhekhe ngesikhathi esifanayo